‘ईन्टु मिन्टु लण्डनमा’ पनि दशैंमै आउने ! « Ramailo छ
‘ईन्टु मिन्टु लण्डनमा’ पनि दशैंमै आउने !
समय : 11:08 am
कोरियोग्राफर रेनशा वान्तवा राईको डेव्यु निर्देशन रहेको फिल्म ‘ईन्टु मिन्टु लण्डन’मा को प्रदर्शन मिति लगभग तय गरिएको छ । साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह र नव नायक धिरज मगर अभिनित यो फिल्मलाई आउँदो सालको दशैंको छेकोको दर्शकमाझ ल्याउने निर्माण पक्षको तयारी भैरहेको बुझिएको छ ।
दशैंको डेटमा ‘छक्का पञ्जा २’ र ‘जय भोले’ ले आफ्नो प्रदर्शन मिति तोकिसकेका छन् । ‘दुई फिल्मले तोकेको डेटमा ईन्टु मिन्टु लण्डनमा आउला त ? यो चाहि हामी अफिसियल कार्यक्रममै रिलिज गर्नेछौं ।’ जे होस् हामी दशैं अगाडी या दशैंमा फिल्म ल्याउँछौं । उनले यसै साता बाँकी छायाँकनको लागि टिम युके उड्ने पनि बताइन् । फिल्मको छायाँकन तीस प्रतिशत बाँकी छ ।